admin – Page3– MM Stars
ခဏခဏ ခေါင်းကိုက်နေခြင်းကို ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်းများ
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှာ ပုံစံ ၊ အနေအထား (၃)မျိုးနဲ့ ခေါင်းကိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ Tension ၊ Migraine နဲ့ Cluster ဆိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tension ကတော့ အဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပြီး ခေါင်းပတ်ပတ်လည် ၊ နဖူးနေရာတွေ ကိုက်တတ်ပါတယ်။ […]
သူနဲကိုယ် မြဲမမြဲဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေက ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ဖူးစာပါလို့ ဆုံဆည်းလာကြရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဘယ်သူမဆို သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် သစ္စာမဖောက်၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်ကြမှာပါ။ တစ်ချို့အရာတွေက ကံတရားက ကြားဝင်ဖြတ်လို့ ပြတ်သွားတတ်တာမျိုး ချွင်းချက်ထားပြီး ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တစ်သက်မခွဲပဲ မြဲမလားဆိုတာ သိချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ […]
ရုပ်မလှပေမယ့် ချစ်သူကောင်းနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)ခု
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ များသောအားဖြင့် ရုပ်ရည်လှပတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ချစ်သူကောင်း၊လက်တွဲေ ဖာ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးပိုများတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရုပ်အ လှ မပြည့်စုံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကို မပိုင်ဆိုင်ဘူးလို့တော့ မဆို လိုပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက် နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ (၁)ငြင်းပယ်မှုဒဏ်တွေကို ပြင်ဆင်ထားပါ တစ်ချို့သော ယောက်ျားတွေဟာ လှတဲ့ မိန်းကလေးကိုမှ […]
မိန်းကလေးတွေက လူပျိုထက် ဘာလို့များအိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းကို စွဲလမ်းမိတာဘာကြောင့်လဲ ?
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ၁ လူပျိုတွေထက် အိမ် ထောင်သည်ယောကျာ်းကပိုစီးပွားရှာနိုင်တယ်ထင်လို့လား တကယ်က စီးပွားရှာနိုင်တယ်မရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်းစီအရည်အချင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ လူပျိုထက် စီးပွားရှာနိုင်အားနည်းလို့မိသားစုအဆင်မပြေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒီတော့တွေးရမှာက အပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ့အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို မက်မောစွဲလမ်းတာက သူ့ကိုရေများများလောင်း (ငွေများများပေး)လို့ဖြစ်နိုင်တယ် ။ မပေးနိုင်တဲ့ […]
အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို လုပ်ဆောင်မိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း (Sleep Sex) အကြောင်းရင်းများ
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ အိပ်နေစဉ်မှာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိပ်နေစဉ်မှာ စကားပြောခြင်းနဲ့ အိပ်ပျော်နေစဉ် ကားမောင်းခြင်းတွေဆိုတာ အဖြစ်များတဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလို ဝေဒနာတွေကို ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကြုံဖူးကောင်း ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဖြင့်ရင် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ။ […]
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး စကားစမပြောခင်မှာကတည်းက သူမကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်နေဟန် ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်လေးတွေ သုံးတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စကားတစ်လုံးမှမပြောသေးပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အထာကျကျ ကျူနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိတယ် ဆော်ရှိပြီး သားဆိုရင်တော့ စာဖတ်နေတာ ဒီမှာတင်ရပ်လိုက်ပါ။ […]
စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်ဖို့ ဒီလိုလူ (၅) မျိုးနဲ့ ခရီးအတူသွားပါ
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ဒီလို လူ ( ၅ ) မျိုးနဲ့ အတူ သွားရင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပြီး တကယ်ကို စိတ်ချမ်းသာရစေမှာပါ။ (၁) စေ့စပ်သေချာသူ ဘာလုပ်လုပ် စေ့စေ့စပ်စပ် ရှိတဲ့သူမျိုးနဲ့ အတူသွားမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ တိတိကျကျ […]
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင့်အကြောင်း အိပ်မက်မက်စေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အကြောင်း အိပ်မက်စေဖို့ဆိုတာ တော်တော် ခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အိပ်မက်တောင် ဘာကို မက်ချင်တယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ပြီး အစီအစဉ်ချထားလို့မှမရတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အိပ်မက်ဆိုတာ မသိစိတ်က ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ညဘက်မှာ အိပ်မက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မသိစိတ်ဆိုတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအနေနဲ့ လုံးဝမသိတဲ့ […]
သင့်ကို တန်ဖိုးကျစေလို့ အသည်းကွဲချိန်မှာ ဒီအပြုအမူ(၈)မျိုးကို လုံး၀မလုပ်မိပါစေနဲ့
ေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီကုဒ္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အသည်းကွဲတဲ့အခါ စိတ်ထိခိုက်ပြီး မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်မိတတ်ပါတယ်။ အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထဲရှိတာတွေလုပ်မိလိုက်ပြီး နောက်မှ နောင်တရတာမျိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းကွဲလို့ ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ညစ်နေပါစေ ဒီအချက်တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် နောက်မှနောင်တရစရာအကြောင်းမရှိသလို ၊ အသည်းကွဲနေတဲ့အခြေအနေကနေလည်း အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) နောက်တစ်ကြိမ် […]
ပိုက်ဆံပေါလွန်းလို့ မဟုတ်ပဲ အချို့ သောသူတွေ ဘာကြောင့်ခရီးတွေသွားနေကြတာလဲ ?
အောက်တွင် ဇော်ဂျီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်နိုင်ပါသည် ။ အချို့သောသူတွေက ပိုက်ဆံလည်းချမ်းသာလွန်းတာမဟုတ်ပဲ ခရီးတွေ တချိန်လုံးထွက်နေတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်က ခရီးလည်းသွားချင်တယ် ၊ ဘာကြောင့်သူတို့ ခရီးတွေ အဲ့လိုသွားဖစ်နေတာလဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ဒီပို့စ်လေးကို ရည်စူးပြီး ရေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁) မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရေရာတဲ့အတွက်။ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှိရင် […]
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုရရှိသွားတဲ့ ဆရာမဂျူး
ဗိုက်အဆီကျပြီး အချိန်တိုအတွင်း Six Pack ရစေမည့် နည်းလမ်း(၈)မျိုး
သွားကိုက်ခြင်းကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
သင် အသက်ရှည်ချင်ရင် ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ့်အရာ(၇)မျိုး
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့က ငွေစက္ကူများရဲ့ အကြောင်းအရာများ